कुवेतबाट श्रममन्त्री विष्ठलाई सुझाव सहितको चिठी: “श्रम सम्झौता हुने कुराले दुखी पनि छु खुसी पनि” — Hamro Sanchar
कुवेतबाट श्रममन्त्री विष्ठलाई सुझाव सहितको चिठी: “श्रम सम्झौता हुने कुराले दुखी पनि छु खुसी पनि”
पुष्कर सिंह धामी प्रकाशित : २०७५/७/६ गते
सम्मानिय श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट ज्यु,
कुवेतका श्रमन्त्री नेपाल जाने नयाँ श्रम सम्झौता हुने कुरामा सुन्दा कताकता खुसि पनि लागि राछ दु ख पनि लागिराछ, मेरो लागि सबैले कमाउने अधिकार पाउनु र अाफैमा अात्मा निर्भर हुनु गर्वको कुरा हो । तेहि पनि हाम्रो नेपाली समाजको लागि अावस्यक पनि देख्छु किनकि दश बर्षे सशत्र जनयुद्धमा धेरैका सिन्दुर पुछिए, धेरै बालबालिका टुहुरा भए, धेरै अामाबुवा सन्तान बिहिन भए, बाकि बचेका बहुबिवाह, जाडरक्सि, जुवा तासले गर्दा म जस्तै पुरुषको कारणले कमाउनु पर्ने बाध्यता छ ।
नेपालमा रोजगारी पाउनु “अाकाशको फल अाखा तरि मर भनेजस्तै छ” तेसैले अलिअलि खुसि छु र दुखि पनि छु । किनकि घरेलु कामदार या धेरै जस्तो अात्माहत्या गरेका खबरहरु सुनेकै हुनुपर्छ । बाकीं जो दैनिक शरीर भरि निलडाम आँखा भरि आँशु लिएर दाइ मलाई बचाउनु यो नर्कबाट नेपाल पठाउनु भनेर दैनिक २/३ जानाको अाग्रह अाउछ तेसैले अझै थपिने सम्भावनाले दुखि पनि छु ।
त्यसैले परराष्ट्रमन्त्री गोकर्ण बिष्ठ ज्युले कुवेतका श्रममन्त्री नेपाल अाउदा गर्नुपर्ने प्रश्नहरु यहि सोसियल मिडिया मार्फत जानकारी गराउन चाहान्छु । हुनत म जाबो श्रमिकले भनेको लाग्दैन होला, हजुरलाइ सुझाव दिने मेरो हैसियत पनि होइन । त्यहि पनि लामो समय देखि कुवेतमा कार्यरत भएको र मैले भोगेको देखेको समस्या हजुर कहाँ पुर्याउन खोजेको मात्रै हुँ ।
१) कुवेतमा घरेलुु महिला कामदारलाई किन स्पोन्सरले सजिलै एक तर्फि केश दर्ता गर्न पाउछ ?
२) केहि दिन अगाडि कुवेती साहुको छोराबाट छुरा हानि हत्या भएकी पेसल माया राईको हत्यारालाई के सजाय हुन्छ ?
३) धेरै दिदिबहिनीहरु सरिरभरि निलडाम लिएर नेपाली राजदुतावास अाउँछन नेपाली घरेलु कामदारलाई हातपात गर्ने कुवेती रोजगार दातालाई के गर्नु हुन्छ ?
४) कतिपय घरेलु कामदार महिला घरमै मानसिक र शारीरिक यातना पाई गर्भवती भएर अाउछन त्यसको जिम्मा कस्ले लिने ?
१) कुवेतबाट नेपालमा नर्स डाक्टर, ईन्जिनियर, सेप्टि अपिसर लगायत अन्य ग्रेटेड पोष्ट लागि डिमान्ड अाउन के नेपाली योग्य लाग्दैन्न ?
२) नेपाली सामान्य कामदारको मासिक ८०/८५ मात्रै तर भारतीय नागरिकको १०० केडी भन्दा माथि, फिलपिन्स लगायत अन्य देशको १५० केडी देखि माथि छ यस बिषयमा पहल हुन्छ कि हुन्न ?
३) भने जस्तै काम र प्राश्रमिक नपाए कामदारले सजिलै अाफुले काम खोजेर गर्न पाउने ब्यबस्था हुन्छ कि हुन्न ?
पुष्कर सिंह धामी सिर्जनशील युवा समाज कुवेतका अध्यक्ष समेत हुन् ।